Fampiharana ny fitsapana mihetsiketsika ultrasonic amin'ny fanadiovana: Noho ny endrika tsy manam-paharoa ny karazana fantsom-boribory dia mety indrindra amin'ny fanadiovana ireo karazana fantsom-panafody rehetra. Ny fitsipika dia ny fanovana ny angovo herinaratra ho lasa angovo ultrasonic ary ampitaina amin'ny ambaratonga sy ny rano accordin ...
Fampiharana ny teknolojia fanapahana ultrasonic amin'ny vokatra elektronika
Abstract: Ny teknolojia ultrasonic dia be mpampiasa amin'ny indostria. Ity taratasy ity dia hampahafantatra ny fitsipiky ny fanapahana ultrasonic, ary hanambatra ny ohatra amin'ny vokatra elektronika manokana hampitahana ny vokatry ny fanapahana mekanika sy ny fanapahana laser, ary handalina ny fampiharana ny teknolojia fanapahana ultrason ...
Fampiharana ANSYS Parameter Optimization sy Probability Design amin'ny Ultrasonic Welding tandroka
Teny fampidirana Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia ultrasonic, ny fampiharana azy dia mihalehibe hatrany, azo ampiasaina hanadiovana poti-tany kely, ary azo ampiasaina amin'ny fametahana vy na plastika koa. Indrindra amin'ny vokatra plastika ankehitriny, ny fantsom-pandrefesana ultrasonic no ampiasaina matetika, satria ny ...
Azonao ve ny fitsaboana ny fiantraikan'ny ultrasonic?
Azonao ve ny fitsaboana ny fiantraikan'ny ultrasonic? Ny fiantraikan'ny mekanika matetika (HFMI), fantatra ihany koa amin'ny hoe Ultrasonic Impact Treatment (UIT), dia fitsaboana mavesatra matetika izay natao hanatsarana ny fanoherana havizanan'ny ...
Ahoana ny famolavolana ny firafitry ny fantsom-pandrefesana ultrasonic
Fomba fampiasana ny fanatsarana ny paramètre ANSA ANSYS sy ny famolavolana mety hitranga amin'ny tandroka fantson-ultrasonika